सलह नियन्त्रणमा उदासीन सरकार - समय-समाचार
सलह नियन्त्रणमा उदासीन सरकार
समय-समाचार बुधबार, २०७७ असार १७ गते, २२:४९ मा प्रकाशित
नेपालमा सलह कीरा प्रवेश गरेको एक साता भयो । सरकारले एक साताको अवधिमा सलह कीरा कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतिर ध्यान नदिएको गुनासो किसानले गर्न थालेका छन् ।
किसानले लगाएको बालीनाली सलह कीराबाट कसरी जोगाउने र कृषकले लगाएको नगदे बाली नोक्सानी हुनबाट बचाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक सातामा समेत उपाय खोजेको पाइँदैन ।
सलह कीरा नेपालमा प्रवेश गरेर फैलिएसँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले तत्काल विषादी छर्कन सम्बन्धित विभागहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, विभागहरूले अहिलेसम्म सलह कीरा फैलिएका क्षेत्रमा विषादी छर्कन सकेका छैन ।
कृषि मन्त्रालयले सलह कीरा नियन्त्रण गर्ने र विषादी नछर्किएपछि आफूले लगाएको नगदे बाली जोगाउन कीरा धपाउन खेतीबारीमा घरेलु उपाय अपनाइरहेका छन् । सलह कीरा १७ जिल्लामा फैलिएको कृषि विभागले जनाएको छ । तर, कृषि विभाग र नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले सलह कीरा नियन्त्रण गर्न र मार्ने औषधि छर्कन अहिलेसम्म तयारी गरेको पाइँदैन । विभाग र परिषदले सलह कीरा नियन्त्रण गर्न प्रयास नगरेपछि किसान हरियो नगदे बाली जोगाउन लागि परेको पाइन्छ ।
कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) नेपालमा ४० देखि ५० हजारको समूहमा सहल कीरा करिब ४ लाख नेपाल प्रवेश गरेको अनुमानका आधारमा बताइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहल कीरा समाउनलाई प्रतिकेजीका दरले पैसा दिने घोषणा गरिरहेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले समेत विषादी छर्कन र नियन्त्रणका लागि उपाय खोजिरहेको पाइँदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेपालमा सलह प्रवेश गरेपछि यसलाई पक्रिएर ल्याउनेलाई प्रतिकिलो २० रुपैयाँदेखि ३ सय रुपैयाँसम्म मूल्य पनि तोकिसकेका छन् । सोहीअनुसार किसान सलह कीरा बटुल्न ब्यस्त देखिन्छन् ।
सलह कीरा फैलिएको स्थानमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका वैज्ञानिक र कर्मचारी खटाएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीको दाबी छ । कृषि मन्त्रालयले नेपालमा सलह कीरा फैलिएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम सुरु गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. केसीले बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. केसीले भनेजस्तो सलह कीरा नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले पहल गरेको पाइँदैन । किसानले भने कृषि मन्त्रालयले सलह कीरा नियन्त्रणमा पहल नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरिरहेका छन् । कृषि मन्त्रालयले सलह कीरा नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि र अन्य उपाय खोजिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. केसीले जाकारी दिए ।
मौन मन्त्रालयका विभाग
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग, खाद्यान्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र नेपाल पशु चिकित्सा परिषद कृषिका लागि काम गर्दै आएका छन् । जसमा कतिपय विभाग र कोषले भन्ने बालीनालीमा लाग्ने रोगसँगै विपत्ति नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । तर, नेपालमा सलह कीरा फैलिएपछि यी विभाग र परिषदले विषादी औषधि छर्कन र नियन्त्रणका लागि पहल नै नगरी मौन बसेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै विभागसँग परिषद छन् । ती विभागले बालीनाली नष्ट गर्न आउने कीराहरूसँगै अन्य विपत्ति नियन्त्रण गर्ने तयारी नगरेको कृषि अर्थविद कौशलकुमार पौडेलले बताएका छन् । कृषकहरू सलह कीराको मात्र होइन, विगतमा फौजी कीराबाट पनि पीडित हुँदा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग मौन बस्ने गरेको अर्थविद पौडेलले बताए ।
‘कृषि मन्त्रालयले सलह कीरा नियन्त्रण गर्ने कि धपाउने हो भनेर प्रष्ट हुनुपर्छ । सलह कीराले बालीनालीमा नोक्सानी गर्दा उत्पादनमा कस्तो असर पर्छ भनेर सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालय किसानलाई कृषि उत्पादन गर्दा आउने समस्याबाट जोगिने उपायसहितको तालिम दिनुपर्छ ।’
कृषिमा किसानलाई सचेत र उत्पादनमा देखिने समस्या नियन्त्रण गर्ने तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले सलह कीरा भित्रिएसँगै औषधि र नियन्त्रणका लागि पहल नगरेको उनको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सहल कीरा माछाजस्तो समाएर नियन्त्रण गर्न खोजिएकाे छ । यो सम्भव नभएको कृषिविद् पौडेलले जानकारी दिए ।
सलह कीराले तराईका जिल्लामा मकै, हरियो केरा, धान, उखु र अन्य नगदे बालीमा नोक्सानी पुर्‍याइरहेकाे छ । सलह कीरा फैलिएको स्थानमा हरियो बाली नष्ट गर्दै उडिरहेको कृषि मन्त्रालयले नै जानकारी दिँदै आएको छ ।